Ku noqoshada dugsiga 2020- Su'aalaha Badanaa La-isweydiiyo - MPS_CMF
Ku noqoshada dugsiga 2020- Su'aalaha Badanaa La-isweydiiyo
Maxay MPS u go'aansatay inay ku biloowdo waxbarashada masaafada fog marka loo eego kan qaabka isku-dhafan (isku darka waxbarashada masaafada fog iyo waxbarashada shaqsiyan ah ee dhismayaasha dugsiga)? Goormaad u malaynaysaa inaan samayn karno qaabka isku-dhafan?
30-kiiLuulyo, Barasaab Walz wuxuu ku dhawaaqaytaladiisa siinta degganayaasha dabacsanaanta go'aaminta haddii la bixinayo waxbarasho qof ahaaneed ama waxbarashada masaafada fog, ama isku darka labadaba (isku-dhafan). Si loo hago go'aan qaadashada,Barasaabku wuxuu kula taliyay iskuulada degmooyinka in dib loo furo dhismayaasha iskuulada isla markaana la siiyo wax barasho qof ahaaneed mar hadii degmada ay ku yaalliin (Hennepin County ee MPS) ay kayar tahay 10 kiis oo COVID-19 ah 10,000 oo deggane muddo 14-maalmood gudahood ah. Wuxuu ku taliyay in degmooyinka in kabadan 50 kiis 10 000-kii kunba ee deggan ay si buuxda u fogaadaan.
Sababtoo ah Degmada Hennepin waxay heshayin kabadan 50 kiis 10,000ee deggane qaybta koowaad ee bisha Luulyo,MPS waxay bilaabaysaa sannad dugsiyeedkatoddobaadka Sebtember 8 oo leh waxbarashada masaafada fogaan dhammaan fasallada. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kalesiin doonnaatababbar, tikniyoolajiyad iyo taageerooyinka caafimaadka maskaxdaqaar ka mid ahdhismayaasha iskuulka inta aan kusiijirno waxbarashada masaafada fog. Waxaan la wadaagi doonnaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fursadahaan markay diyaar noqdaan.
MPS waxay qorsheynayaan qaab ujeedo leh oo ah in la bixiyo waxbarasho qof ahaaneed taasoo had iyo jeer tixgalisa sida COVID-19 ugu fidsan yahay bulshadayada, iyo sidoo kale guusha hawlqabad ee qaabkeena waxbarasho ee hadda jira, iyo caafimaadka iyo imaanshaha shaqaalaha iyo ardayda. . Maaddaamatirada COVID-19 ay si aad ah hoos ugu dhacday, waxaan u wajihi doonnaa qaab isku-dhafan oo ardayda dhigato dugsiyada dhowr maalmoodtoddobaadkii kadibnamaalmaha kale ka-qaybqaataan waxbarashada masaafadafog.
Sidee dareen raaxo leh ugu dareemi karaan shaqaaluhu bixinta shaqsi ahaaneed ee waxbarashada dhismayaasha iskuulka?
Xog-ururin lagu sameeyay shaqaalaha oo la bixiyay xagaagii, 84% ayaa sheegay inay "awoodi doonaan inay soo noqdaan oo ay shaqadayda ku qabtaan shaqsi ahaan ama qayb ahaan shaqsi ahaan" (62.5%) ama "waxay awoodi doonaan inay soonoqdaan oo ay shaqadayda ku qabtaan shaqsi ahaanama qayb ahaan shaqsi ahaaneed oo leh xoogaa taageero dheeraad ah oo ay ugu wacan tahayxaalad caafimaad awgeed "(16.7%).
Su'aal kale ayaa la weydiiyay "Sidee ugu qanacsan tahay inaadku laabatid shaqada shaqsi ahaan simistarka deyrta (iyadoo taxaddarrada amniga ah ee la xiriira COVID-19) haddii uu oggolaadobarasaabku?" Jawaab bixiyaashaas (n = 4,329) waxay ku qiimeeyeen heerkoodaku-qanacsanaanta qiyaasta 5-dhibic laga bilaabo "1 = aan aad ugu qanacsanayn" ilaa "5 = aad uguqanacsan." Intooda badan (58%) jawaab-bixiyayaasha ayaa sheegay inaysan ku qanacsanaandoonin ku laabashada dhismayaasha xilliga dayrta. Jawaabuhu waxay ahaayeen sidan soo socota:
1 = 1,505 (35%) Aan aad ugu qanacsanayn
5 = 398 (9%)Aadugu qanacsan
Maxaa MPS u samaynaysaa waxbarashada masaafada fog halka degmooyin kale oo badan ay sheegeen inay si toos ah ugu wareegayaan qaabka isku-dhafan (isku darka waxbarashada masaafada fog iyo waxbarashada shaqsiga ah)?
MPS waxay miisaamtay qodobbo badan si ay u go'aamiso sida ugu wanaagsan ee loo badbaadi karo oo si wax ku ool ah loogu gudbin karo ardayda marka dugsiga dib loo bilaabo Sebtember. Go'aanka lagu joojinayoqaabka isku-dhafan bilowga sannad dugsiyeedka wuxuu ku salaysan yahay mudnaanta caafimaadka iyo badbaadada ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha.
Marka la eego xog-ururinta shaqaalaha iyo bulshada, inka badan 40% shaqaalaha iyo qoysaska ayaan weli ku qanacsanayn waxbarashada shaqsiga ah, taasoo ka dhigeysa hirgalinta wax ku oolka ah ee isku-dhafka mid adag. Annaga oo taas maskaxda ku hayna, waxaan soo sharraxnay qaab kusoo-galka wejiyaysan (eeg 5-ta weji ee MPS ee Waxbarashada Amniga ah) ee qaabka isku-dhafan oo loo hirgalin doono hadba sida kiisaska COVID-19 si isdaba joog ah hoos ugu dhacaan.
Intaas waxaa sii dheer, baahiyaha iyo awoodda degmo kasta way kala duwan yihiin. MPS, waxaan leenahay 15 iskuul oo aanay macquul ahayn in lailaaliyo kala-fogaanshaha bulshada xitaa marka kala bar ardayda ay joogaan. 14 iskuul oo kale ayaa isticmaalidoona qolalka jimcisiga, qolalka qadada iyo hoolka shirarka si ay ugu ogolaadaan kala-fogaanta bulshada. Marka la isku daro, taasi waa ku dhawaad ??40% dhismahayaga halkaas ookala-fogaanshaha bulsheed aanu macquul ahayn ama ay aad u adkaan lahayd in lailaaliyo.
Waxaan sidoo kale xushmaynaynaa in qaar badan oo ka mid ah shaqaalahayagu aysan awoodi doonin inay shakhsi ahaan u soo sheegaan sababtuna tahay inay ku jiraan qaybtahalista sare ku jirta. Intaa waxaa sii dheer, annagu ma haysanno basas ku filan iyo darawallo si aanugu habaynno dariiqyada basaska dheeraadka ah ee loo baahan yahay in ardayda lagu kala-fogeeyo baska. Muddo sannado ah, MPS waxa ku yaraatay darawallada basaska xitaa iyada oo aanay soo bixincaqabadaha COVID-19.
Awood u yeelashada in loo gudbo wajiga 3aad ama Wajiga 4aad ee qaabka isku-dhafan ayaa ku lug yeelan doonta taxaddar badan iyo tixgelin si loo joogteeyo kala-fogaanshaha bulshada iyo awoodda MPS ay ku dhisto awoodda shaqaalaheeda, nidaamkeeda iyo kaabayaasha.
Maxay MPS ugu yaraan u heli weyday ardayda tacliin ahaan halgamaya si ay ugu soo noqdaan waxbarashadda qof ahaan isla markaaba Sebtember?
In kasta oo ikhtiyaarkan la tixgaliyay, way adagtahay in si sinnaan ah loo caddeeyo ardayda tacliinta la halgameysa. Waxaan ka fekeraynaa qaabka gelitaankawejiyaysan ee kusoo laabashada waxbarashada shaqsi ahaaneed halkaas oo ardayda leh baahiyaha ugu badan ay ku laaban doonaan dhismayaasha dugsigasida jadwal wareeg ah oo kale (Wejiga 3aad).Tixgelintaqaarkood marka la go'aaminayo ardayda ugu baahida badan ayaa laga yaabaa inaynoqdaan ardaydeena helaya adeegyada waxbarashada gaarka ah, ardayda guri la'aanta ah iyo ardayda aadka u guurguura, bartayaasha luuqadda ingiriisiga, iyo ardayda qiimeyntiiugu dambeysay eeNidaamka Qiimaynta Qaabaynta ee Macallimiinta (FAST)aymuujiyeen baahidaay u qabaan taageero ballaaran .
Muddo intee le'eg ayaad u malaynaysaa inaad sii joogi doonto waxbarashada masaafada fog?
Suuragal ma ahan in la saadaaliyo goorta ay noqon doonto amaan ku filanardayda inay ku laabtaan dhismayaasha dugsiga. MPS waxay sii wadi doontaa la tashiga mas'uuliyiinta caafimaadka qaranka iyo kuwa maxalliga ah si loo hubiyo in go'aankeenna aan ku bixinno waxbarasho qof ahaaneed la sameeyo markii ay yar tahay halista in lagu qaado COVID-19 laguna faafiyo bulshada.
Miyaad ogtahay inta arday ee kusoo laaban doona dhismayaasha dugsiga haddii MPS ay bixiso waxbarasho shaqsiyeed bisha Sebtember?
Xog-ururin lagu sameeyay qoysaska, badankood (36%) waxaysheegeeninay door-bidayaan hannaan isku-dhafan oo bixinaya wax-barashada qof ahaaneed marka lagu daro waxbarashada masaafadafog. Tan waxaa ku xigtay 30% qoysaska doorbidaya waxbarashada masaafada fog iyo 24% doorbidaya inay si buuxda ugu laabtaan waxbarashada shaqsiga ah; 9% ayaan go'aan ka gaarin doorbidooda.
Ka waran qoysaska la halgamaya isku-dheelitirka shaqada iyadoo ay la socto kormeerka waxbarashada masaafada fog ee carruurtooda? Ama xitaa waalidiinta ee u baahan kara inay dib ugu laabtaan shaqada xafiiska/goobta shaqada ee aan heli karin daryeelka ilmaha?
Saamaynta waxbarashada masaafada fog ee qoysaska waxay ka ahayd tixgelin weyn Go'aankeenna Waxaan ognahay inay ku adag tahay waalidiinta inay ka soo baxaan shuruudaha ka shaqaynta guriga iyagoo ka caawinaya carruurtooda waxbarashada fog .. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaheena waa waaliddiin sidoo kale waxay la kulmayaan halgan la mid ah qoysaskayaga shaqada. .
Laakiin waxaan sidoo kale ognahay dib usoo noolaanshaha COVID-19 eebxagaaga eegobollo badan oo dabciyay ama aan hirgelin habraacyada ilaalinta ku-filan, haddii aynaan sii wadintaxaddarka ugu badan, waxaan ka-qaybqaadan doonnaa dib usoo noolaanshaha u dhigma ee bulshadeena.Badbaadada iyo caafimaadka qof walba waa mudnaantayada ugu sarraysa.
Mar labaad, waxbarashada masaafada fog waxay u muuqan doontaa mid aad uga duwan sidii ay ahayd gu'gii la soo dhaafay maalin kasta, is-dhexgal macno leh oo lala yeesho ardayda, macallimiinta, iyo ardayda la dhigata, taas oo wax badan ka qaban doonta inay ardayda ku mashquulaan oo ay iskood u hagaan waxbarashada inta lagu jiro maalinta dugsiga.
Markay ardayda oo dhami guriga wax ka baranayaan (Wajiga 2), waa maxay farqiga u dhexeeya tilmaamaha waxbarashada guri-ku-haynta iyo waxbarashada masaafada fog "joogtada ah"?
Waxbarashada masaafada fog "Caadiga ah" ee ardaygu waa waxbarashadawakhtiga maalin dugsiyeed caadi ah oo caadiyan ah ku dhawaad ??lix saacadood MPS. Dhanka kale, baridda guriga waa sida caadiga ah hal saac maalintii ama sida ay go aamiyeen kooxda waxbarashada gaarka ah ee IEP waxaana siiya hal-qofoomacallin ah oo shaati haysta. In kasta oo uu manhajku la mid noqon karo kii ay isticmaali jireen fasalkii caadiga ahaa ee ardayga, hadana waa la waafajiyey oo si gaar ahaaneed ayaa loo habeeyey si loo daboolo baahiyaha horumarka ardayga si ay usii wadaan xawaaraha in kasta oo waqtiga waxbarashadu ka gaaban tahay.
Inta lagu gudajiro waxbarashada masaafada fog, ardayda heleysa adeegyada Waxbarashada Gaarka ah wali ma ku jiri karaan IEP guriga?
Haa. Hadii ardaygu awoodi waayo inuu kaqaybqaato waxqabadyada waxbarashada masaafada fog ee fasalkoodasababo caafimaad amaarrimo kale, kooxda IEP ee ardayga ayaa wali qori doona guri-ku haynta IEP (Dejinta Federalka 8). Sababo badan ayaa jira sababta ardaygu u awoodi kari waayey inuu kaqaybqaatowaxqabadyada waxbarashada masaafada caadiga ah sida jir dhiska ama maskaxda; aan ku filnayn adkeysi ku lug leh nashaadaadyada wax barashada ee dhererka maalin dugsiyeedka caadiga ah; ama waxaa suuragal ah in uusan sii wadan karin nashaadaadkii iskuulka caadiga ahaa.Fiiro gaar ah:Adeeg bixiyeha banaanka ah wuxuu u baahan doonaa inuu dukumiinto taladooda ah in ardayga helo adeegyada guri-joogga.
Miyay dib u dhigaysaa hirgelinta naqshada degmada ee dhameystiran (CDD)?
Inta badan isbeddelada barnaamijyada dugsiga ee CDD-ga waxaa loo hirgalin doonaa sidii la qorsheeyay laga bilaabo sannadka soo socda ee Sebtember 2021. Waxaan rajeyneynaa inaan kor ugu qaadno kor u qaadista caafimaadka maskaxda ee loo qorsheeyay sanadka soo socda si looga caawiyo ardayda iyo qoysaska la tacaalidda dhibaatooyinka cudurkan. Si aad u ogaato waxa ikhtiyaaradaagu yihiin iskuulada, waxaad u adeegsankartaa xog aruurinta internetka ee ku saleysan cinwaanka gurigaaga: https://schoolrequest.mpls.k12.mn.us/cdd.
Su'aalaha ku saabsan xulashooyinkaaga dugsiga, kala xiriir Meeleynta Ardayda 612.668.1840 amasps.department@mpls.k12.mn.us.
Hagaha qoyska ee ku laabashada ardayda si amni ah waxbarashada shaqsi ahaaneed
Ku noqoshada Barashada Shaqsiyadeed: Su’aalaha Badanaa Lays weydiiyo
Marxaladaha 5 ee MPS ee waxbarashada badbaadsan